पुतली - जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
प्रकाशित मिति : बिहिबार, साउन ८, २०७१
-सागर ‘मणि’ थापा
मोतीराम साहूको पसल अगाडि आएर एउटा भ्यान रोकियो । भ्यानबाट उत्रियो एउटा अजङ्गको मानिस । मोतीमानले सामान नचाहिनेजस्तो गरेर वास्तै गरेन । गठिलो शरीर र गोरो अनुहार भएको त्यो मानिस कंपनीको भरपर्दो सेल्सम्यान थियो । कब्जियतले थला परेको रोगीले चर्पीमा यातना पाएजस्तो थियो उसको कामदारको हालत । पुस्करले झर्केर सोध्यो—‘ए मोतीमानजी, भन्नोस् न सामान कहाँ राख्ने ? उस्को हात गलिसक्यो ।’
‘इः ह्याँ मेरो टाउकाँ राख्न लगाऊ ।’ त्यत्तिकै कड्कियो मोतीसाहू । कार्टुनहरू खसेर फर्सीको हालत व्यहोर्न पुगे । मार्बले भुइँमा तेलको प्याकेट फुटेर कुलो लाग्यो । पुस्कर करायो—‘अब त चित्त शान्त भो होला नि तिम्रो । यो खेर गएको सामानको पैसा कस्ले तिर्छ ?’ —‘कुन्नि कस्ले तिर्छ, मलाई के था ?’ आम्मै ! मोती त झगडा गर्ने सुरमा पो देखियो । — ‘तर एक हप्ता पहिले त तिरेका थियौ त । मनकुमारीले रु. ४०००÷— बराबरको सामान नोक्सान पार्दा जम्मै पैसा तिरेका कुरा बिस्र्यौ ? पुतली भाउजू खै ? उनले मगाएकी थिइन् यी सामान ।’ पुस्करले दृश्टान्त दियो । पुस्कर र पुतलीको कुरा मिल्थ्यो तर लोग्नेलाई पटक्कै मन पर्दैनथ्यो त्यो कुरा । पुस्करलाई एक हप्ता मात्र नदेख्दा पनि पहिलो प्रेमीलाई भुल्न नसकेकी प्रेमिकाकोजस्तो खराब हालत हुन्थ्यो उनको ।
भ्यान फर्केको आवाज सुनिन् पत्नीले । माथिबाट कुदेर आइन् । अघि पोखिएको तेलमा चिप्लेर पुतली पछारिइन् । बायाँतिरको फिला बजारियो । स्वभाव अनुसार कर्कशा स्वरमा तेल पोख्नेलाई सत्तोश्राप गर्न थालिन् । गोडा खोच्याउँदै लोग्नेसामु आई झपारिन्— ‘मलाई लडाएर मार्न तेल पोखेको ? पसलमा बसेपछि घाटा नपारी चित्त बुझ्दैन हैन तिम्लाई ? धिक्कार छ । हे भगवान् ! कस्तो पोइ पाइछु नि !’ धारे हातले लोग्नेको पुर्पुरोमा हान्न खोजिन् । हाँस्दै ऊ पन्छिन सफल भइहाल्यो— ‘यो तेल मैले पोखाएको हैन मैया । तिम्रै पुस्करेले.., मेरो मतलव त्यो गधाले आफ्नो कामदारद्वारा पोखाएको हो ।’ —‘भनेपछि त्यो आवाज उनकै भ्यानको रहेछ होइन त ?’ ओहो ! पुतलीलाई हर्ष र विस्मातले सताइहाल्यो— ‘मैले अर्डर गरेको सामान लिएर आएको थियो । मैले मीठोखाले चकलेट र बिस्कुट मगाएकी थिएँ । तिमीले मलाई बोलाइदिनु पर्दैनथ्यो ? ऊसँग भेट्ने अर्को काम पनि थियो मेरो । किन खबर गरेनौ ? ऐया.., मरेँ नि ।’ उनको दुखाइ दुई किसिमले प्रवल भएर आयो । लोग्नेको हालत पानीमा रुझेको मुसोजस्तो भयो । पुतलीले चेतावनी दिइन्— ‘धोइदिऊँला है अब तिम्रा लुगा ? भिजाएकी लुगा पनि त्यस्सै सुकाइदिन्छु । त्यो पनि ननिचोरीकनै । सुन्यौ होइन ?’ अन्तिम वाक्य तेहोराएर बोलिन् उनले । काम पनि त्यस्तै गरिन् ।
पुस्करको खाइलाग्दो ज्यानप्रति पुतली आकर्षित थिइन् । बोलीचाली सुनेर मन्त्रमुघ्ध हुन्थिन् । उसले ड्राइभिङ सिकाउन थालेपछि त पुतलीको दिलदिमाखमा लोग्नेको सट्टा पुस्करकै नाम कुँदिएको छ । उनी त झन् टोलकै सुन्दरी आइमाई हुन् । एकदिन पुस्करले लोग्नेकैसामु प्रशंसा गरिदिएको थियो—‘पुतली भाउजूका आँखा र ओठ यति कामुक छन्, जोगीले पनि बिर्सन सक्तैन ।’ उनी स्तन हल्लिने गरेर हासिन् । लोग्ने भित्रभित्रै मुरमुरियो । उनको सुन्दरताको वयानमा वक्षको तारिफ नगरिनेदिने हो भने अन्याय नै गरिएको ठहरिन्छ । देखिने कही होइन तर पनि लुगाभित्र आकर्षक चीज छ भन्ने विश्वास हुन्छ पुरुषलाई । नत्र बारुलाको खीलझैँ उडिल्लो वक्षमै किन गाडिन्छन् त तिनका आँखा ? फूलको थुङ्गाजस्ता उरोजलाई भलिबलमा परिणत गर्ने लालसामा जलाइरहन्छन् आफूलाई भित्रभित्रै । पुतलीले स्वेटर लगाएकी बेलामा पसलमा झुम्मिने केटाहरूको जमात सानो हुन्छ । कुर्ता पहिरिएकी समयमा उनको व्यापार चौबर हुन्छ । मोतीमानलाई स्वास्नीको सुन्दरताले असह्य पारिरहेको थियो । मोतीले जुँगालाई घृणा गर्दथ्यो । अनि पो रिस उठ्यो कि पुतली त्यसैलाई मियो बनाएर दाईँ गर्छिन्—‘छ्याः कस्तो नराम्रो मान्छे । आइमाईजस्तो देखिन्छौ तिमी त । मर्द हुनु त पुस्करजस्तो । जुँगामुठे ओठ मुसुक्क मुस्काउँदा हिमाल देखिन्छ । कत्ति सुन्दर !’
—‘भयो सुन्दर ।’ मोतीमान डाहाले तीव्र आलोचना गर्दछ—‘असिनाको गेडो छुन त डराउने आइमाईलाई हिमाल राम्रो लाग्ने ! मैले पालेको जुँगा नराम्रो भा’थ्यो । कैला रे । फेरि भन त कैला जुँगाले म कस्तो देखिन्थेँ रे ?’
—‘सिँगाने बोकोजस्तो देखिन्थ्यौ ।’ तुरुन्तै घृणित उत्तर दिन्छिन् पुतली—‘अग्लो मान्छेलाई मात्र काला र बाक्ला जुँगाले आकर्षक र हेण्डसम देखाउँछ । तिमीजस्तो बुर्कुन्चेलाई त झुसिल्कीराजस्तो कुरूप बनाउँछ । यस्तो मान्छेले रहर नगरेकै बेस् ।’ उनले धेरैचोटि पुस्करकै अघिल्तिर मोतीमानको धज्जी उडाएकी थिइन् । ऊ रिसले मुरमुरिन्थ्यो । पुस्करचाहिँ मुसुमुसु हाँसिरहन्थ्यो ।
अर्को दिन बिहान मोतीमान बाथरुम गएको थियो । त्यही मौकामा जेठी छोरीले कन्तुर सफाइ कार्यक्रमलाई नवीकरण गरी । ऊ कक्षा ८ मा अध्ययनरत थिई । क्लास बिहान लाग्दथ्यो । उसले जङ्कफुडका केही प्याकेटहरू ब्यागमा हाली र टाप कसी । दिनहुँ पसलको हिसाब बिग्रन थालेपछि पुतलीका जोईपोइबीच झगडा पर्न थालिसकेको थियो । मोतीले आरोप लगायो— ‘मलाई थाहा छ पसलको पैसा हिनामिना गरेर तैँले कसलाई पोसेकी छेस् ।’ उसले सरासर पुस्करको नाम जोड्न खोजेको हो । पुतली पनि के कम थिइन् र । प्रत्यारोपमा उत्रिइन्— ‘मलाई पनि त्यस्तै लाग्या छ । आफैँले पैसा टप्काएर एउटी आइमाईलाई पोसिरहेको कुरामा मलाई द्विविधा छैन । भोलि आउली नि सामान लिएर । मैले जानेकी छु त्यसलाई…।’ उनले मनकुमारीप्रति कटाक्ष गरिन् ।
पसलमा केही ग्राहकहरू थुप्रिसकेका थिए । कोही त फतफताउँदै छिमेकी पसलतिर हिँडे । एकजना ग्राहकले भन्यो— ‘ए मोती भाइ । खै, खै मेरो खाता पल्टाऊ त । कति पैसा भएछ ? म सबै रकम चुक्ता गरेर जान्छु ।’ उसले अरू सामान पनि दिन अनुरोध ग¥यो । मोतीले थप सामानको हिसाब पनि पुरानै खातामा चढायो । अहिले फुर्सद छैन भनेर पठायो । ग्राहक जिल्ल प¥यो ! बिहानै सामान उधारोमा दिएको निहुँमा पुतलीले ख्याउँख्याउँ गर्न थालिन् । यस्तैमा अर्को नियमित ग्राहक आइपुग्यो । उसको नाम हो राजेश । उमेरले माटो खाने बेला भैसक्यो तर पुतलीको जवानीले उसलाई समय समयमा कुतकुत्याउँछ ।
त, बूढो राजेशले आलोचना ग¥यो—‘सधैँभरि पत्नीलाई किन टोकिरहन्छौ मोतीमान ? यत्ति राम्री र जाती आइमाईलाई पत्नीकोरूपमा पाउँदा पनि कहिल्यै खुसी हुन जानेनौ हगि ?’ —‘तिमी चुप लाग बूढा ।’ एक्कासि झम्टिन खोज्दै तल्लोस्तरको व्यवहार ग¥यो मोतीमानले— ‘मेरो पारिवारिक झगडामा हात हाल्ने के हैसियत छ तपाईँको ? दुईचार हजारको ग्राहक भएँ भन्दैमा अर्काको परिवारको चासो राख्नु राम्रो हुन्न राजेश दाइ । उधारो नै खाने हो क्यारे आखिर तिमी पनि…!’
—‘ल सुन्नुभयो त दाइ ! जस्को जौ खानु, उसैको जुँगा उखेल्नु भनेको यही हो !’ पुतलीले लोग्नेको भरमार आलोचना गर्न थालिन्— ‘तिम्रो बालाई गुन लगाएको प्रतिफल यही हो त ? सायद राजेश दाइ यहाँ भएर यिनी चुप लागेका छन् । नत्र त…।’ — ‘नत्र के त ?’ लोग्ने त चट्याङ्गजस्तो भयो— ‘तैँले भन्न खोज्या के पुतली ? के मेरो बाले यिनको ऋण खाएर मरेर गए भन्न खोजेकी तैँले ?’ राजेशले सोच्यो, उसकै कारण उनीहरूको झगडा पर्दैछ । मोतीले ठाडै के आरोप लगायो भने, काम न काजसँग उसको पसलमा ढुक्न आउँछ सधैँ । यदि राजेशले मोतीको बालाई पैसा सापटी दिएको नहुँदो हो त उसले उधारो सामान दिनु त परको कुरा, पसलमै पाइला राख्न दिने थिएन । राजेश फन्केर हिँड्यो । पुतलीले ग्राहक भड्काएको आरोप थोपरिन् लोग्नेमाथि ।
अर्को दिन मोतीमान घरमा थिएन । पुतली पसल चलाएर बसेकी थिइन् । पुस्करको रातो भ्यान आँगनमा आएर रोकियो । पुस्करले पसलमा सामान राखिदियो । पुतलीलाई त्यो रातो भ्यानले निकै आकर्षण ग¥यो । उनी त्यसलाई सुमसुम्याउन पुगिन् । उनले गाजलीलाई बोलाइन् । ऊ होमवर्क गर्दागर्दै आई । ममीले पसलमा केही बेर बस्न आदेश दिइन् । छोरीले त्यसरी नै स्वीकार गरी, जसरी भन्सारमा सरूवा पाएको कर्मचारीले सहर्ष हाकिमको प्रस्ताव मान्ने गर्दछ । तर गाजलीको त्यो उत्साह पलभरमै पानीको फोकामा परिणत भयो । पुस्करले आमासँग हिमचिम बढाएको मन परेको थिएन । उसमाथि कन्तुरमा ताल्चा ठोकिदिइन् । यो त मिष्ठ पकवानको बास्ना मात्र लिन पाएकोजस्तो भयो । अझ आमाले थपिन्—‘ कुन कुन सामान बेच्छेस्, सबैको नाम लेखेर राखेस् नि ।’
पुतली पुस्करसँग मोटर ड्राइभिङ सिक्न भ्यानमा चढेर बाटो लागिन् । उसले सुरूमै पिचरोडमा तालिम दिन थाल्यो । पुतली ब्रेक, गिएर आदि पार्टपुर्जासँग सङ्घर्ष गर्नुपर्दा समय समयमा झस्किन्थिन् । पुस्करचाहिँ करेन्टको झट्काको महसूस गर्दथ्यो । पुतली भाउजूको तातो हात र सासले गर्मी पारिरहेको थियो उसलाई । करिब एक घण्टापछि एउटा पार्कभित्र भ्यान रोकेर उनीहरू बदाम खाँदै भलाकुसारी गर्न लागे । पुतलीले भनिन्— ‘तिमीले मेरा दुईटा इच्छा पूरा गर्नुपर्छ पुस्कर ।’ पुलकित हुँदै बोल्यो ऊ—‘एउटा त यही भइहाल्यो । अर्को के नि ?’ — ‘ड्राइभिङको कुरा बेग्लै । एउटा हो, सरकारी नोकरी । अनि अर्कोचाहिँ एउटा छोराको जन्म । तिमीले मदत गर्नुपर्छ पुस्कर ।’
छोरोको प्रसङ्गले पुस्कर कुतकुतियो । अर्काकी स्वास्नीलाई कसरी मदत गर्ने ? भित्रभित्रै उम्लिन थाल्यो । अब उसमा बढी आँट देखाप¥यो— ‘तिमीसँग बोलेको देख्दा त तिम्रो लोग्नेले ढाडेआँखा पल्टाएर हेर्छ । अझ छोरो पाउने काममा मदत गरेको चाल पायो भने के मात्रै नगर्ला ? काटिन्छु म ।’ —‘यति छिटै हरेस नखाऊ न पुस्कर ।’ कन्चटमा उम्रेका पसिनाका दानालाई सलले पुछिदिँदै ढाडस दिइन् पुतली भाउजूले । अन्ततः यी दुईबीच कुरा मिल्यो ।
पुतलीले लोकसेवाको फाराम भरिन् । छोरीले पत्याइन । लोग्नेले त झनै आलोचना ग¥यो । पुस्करलाई अहिल्यै निमोठेर मारौँ भन्ने भाव ल्यायो उसले आँखामा । सोर्सफोर्सको जमानामा पुतलीजस्ती गोज्याङ्ग्रीले लोकसेवा पास गर्ने ! महिला सवारी चालक पदमा सरकारी नोकरी ! असम्भव । पुतलीले लोग्नेसँग बाजीको प्रस्ताव राखिन् ।
अचम्मै भो ! पुतलीले लोकसेवामा नाम निकालेरै देखाइदिइन् । उनले महाप्रवन्धकको मोटर हाँक्ने सुअवसर प्राप्त गरिन् । सरकारी प्रशासनको इतिहासमा यो नवीन आयाम थियो । ऐतिहासिक घटना थियो । पुतलीले पसलमा समय दिन छोडेपछि व्यापार चौपट हुँदै गयो । उनको रूप हेरेर पो सामान खरिद गर्न आउने रहेछन् ग्राहकहरू ! त्यो बेकामे राजेशले मोतीमानको अपमान ग¥यो— ‘पुतली छैन । किन आउनु तिम्रो पसलमा ? उधारै खानु छ भने यै पसलाँ मात्र खाता बनाउनुपर्छ भन्ने केही छ ?’ मोतीले पनि हृदयको उकुच निकाल्यो । भन्यो— ‘तँलाई स्वास्नी टोकुवा । मेरा पसलमा उधारो घिचेर उल्टै ममाथि अपशब्द प्रहार गरिस् होइन ? मेरी स्वास्नी बुटिक शपमा उभ्याइएकी पुतली हो ? भ्रष्टाचारी थिस् तँ । फुँडो पनि होस् । नोकरी छन्जेल रन्डीहरूको गाला मुसारेर सम्पत्ति सकिस् । ऐले छोरीहरूको दानमा बाँचेको छस् । मर्ने बेलामा अर्काकी स्वास्नीप्रति कुदृष्टि लगाउन लाज लाग्दैन तँलाई ।’ — ‘तँ नि तँ ? आफू मात्र चरित्रवान् बन्न नखोज् मोतीमान । त्यो मनकुमारीसँग लसपस छैन नि तेरो ?’ बूढो राजेशले पनि मोतीको पोल खोलिदिन थाल्यो । मनकुमारीलाई दुईलाख रुपियाँ दिएको उसलाई थाहा रहेछ । जाँदाजाँदै राजेशले मोतीमानको पसल सुकाइदिने चेताउनी दियो । ग्राहकहरूलाई भड्काउने काममा लाग्नेछ ऊ आजैबाट ।
पुतलीले हाँकेकी मोटर ठूलो दुर्घटनाको शिकार हुन पुग्ग्यो । मोतीमा बाहिरबाट आई सुस्ताउन नपाउँदै घरमा फोन आयो । ऊ सास न बाससँग अस्पताल पुग्यो । खुट्टा काट्नु पर्ने हो कि भन्ने डरले मोतीमान काँप्यो । उसका कानमा यी संवादहरू प्रतिध्वनित हुन थाले— ‘त्यो पुस्करे र तिमीबीच कस्तो सम्वन्ध छ ?’ —‘तिम्रो नि ? त्यो होलसेलर आइमाईसँग के नाता छ ? मनकुमारी के मनकुमारी । हो, ऊसँग तिम्रो जस्तो सम्वन्ध छ, मेरो पनि पुस्करसँग त्यस्तै छ ।’ बोल्यो कि पोल्यो ! भुइँमा बोली खस्न पाउँथेन, स्वास्नीबाट मुखभरिको जवाफ पाउँदै आएको थियो उसले । तर उसले पुतलीको ओखतीउपचार नगरी सुखै पाएन, ग¥यो । त्यस्तै छ महिनापछि पुतली हिँड्न सक्ने भइन् । यद्यपि, उनको स्वतन्त्रतालाई एकजोर वैशाखीले कब्जामा लिइदियो ।
एकदिन गाजलीले पसलको पैसामा हात लामो गर्दागर्दै आमाले फेला पारिन् । आमाले गाला पड्काउँदै स्पष्टीकरण मागिन्— ‘यो पैसा लगेर कस्लाई दिन्छेस् ?’ उसले जवाफ दिई— ‘प्रतापलाई दिन्छु । उसले मलाई गणित सिकाउँछ । ट्युसन फिसकोरूपमा यो पैसा…।’ बोली नसक्दै आमाले तोरीको फूल देखाइदिइन् । आरोप लगाइन्— ‘तैँले पैसा चोर्ने गरेकीले नै यो पसलको सह गएको रहेछ !’ करिब तीन घण्टाकोबीचमा उनको पसलमा एकजना पनि ग्राहक आएन । छिमेकीको पसलमा ग्राहकहरूको ठूलै भीड थियो । उनी त्यहाँको रहस्य बुझ्न वैशाखी टेक्दै पुगिन् । उनले देखिन्, त्यो पसलमा एउटी राम्री केटी काम गर्दै रहिछ । अनायासै उनका आँखा भरिए । त्यो दृश्य देखेर त्यो पसलको साहू मुसमुसु हाँसिरहेको थियो ।
कवि भवानी पौडेलको कवितासङ्ग्रह ‘समयको सारङ्गी’ सार्वजनिक
सिद्धिचरण श्रेष्ठ ः युग परिवर्तनका पक्षपाती
पृथ्वीनारायण शाहलाई रु १००१ सहयोग गर्ने बिसे
सातौं गितमा ‘सुस्तरी आयौ…’ भन्दै किरण खडका (भिडियोसहित)
युवराज सफल :रित्तो थाल पालेर
५ वर्षीय बालिकाले गीत गाउँदा दर्शकका आँखा रसाए ! (भिडियो)